ပိုမိုအဆင့်မြင့်လာသော Capsule Hotel များ၊ ဒီလိုသာ သက်တောင့်သက်သာရှိမယ်ဆိုရင် သေချာပေါက် တည်းကြည့်ချင်တယ် - JAPO Japanese News
ကြာ 26 Aug 2021, 15:41 ညနေ
စာဖတ်သူများ Capsule Hotel ကို ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ပုံမှန်ဆို ဟိုတယ်တွေက ဈေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Capsule Hotel ကတော့ အိပ်ဖို့အတွက်သာလျှင် ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီး နေရာအနေနဲ့ကလည်း အိပ်ဖို့လုံလောက်ရုံပဲ အခန်းဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ရှိဘုယမှာ အလုပ်လုပ်တုန်းကတော့ Capsule ဟိုတယ်မှာ မကြာမဏ တည်းခိုဖူးပါတယ်။ အလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ရထားကလည်း မရှိတော့ဘူး။ တက္ကစီနဲ့ပြန်ဖို့ကလည်း ဈေးအရမ်းကြီးတဲ့အတွက် ဒီလိုမျိုး တည်းခိုဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။
စစချင်းတည်းခိုတုန်းက “ လျှို့ဝှက်နေရာ” နဲ့တူလို့ စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပေမယ့် ၄ ကြိမ်မြောက်တည်းတဲ့အချိန်ကစပြီး သိပ်စိတ်မလှုပ်ရှားတော့ပါဘူး။
ဈေးသက်သာလို့ ကျေးဇူးတင်မိပေမယ့် လူအိပ်ဖို့နေရာထက် ပစ္စည်းထည့်ဖို့နေရာလို့ ခံစားရပြီး နေရတာ သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး။
အခုတော့ အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာ မတည်းဖြစ်တော့ဘူးလို့တွေးခဲ့ပေမယ့် ရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါ အခုတလော Capsule Hotel တွေက အဆင့်မြင့်လာတဲ့ပုံပါပဲ။
ဒီလိုပုံသာဆိုရင်တော့ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ကို သွားတည်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်
အိပ်ရာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံက အရင်တုန်းကနဲ့ မကွာခြားပေမယ့် အပြင်အဆင်ကတော့ ရှယ်ပါပဲ။
အာကာသယာဥ်ထဲကို ရောက်နေသလိုမျိုး စိတ်လှုပ်ရှားမိတာကတော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းလား?
တည်းခိုသူတွေ အတူတူမျှဝေသုံးရတဲ့နေရာတွေကလည်း သန့်ရှင်းပြီး ပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးထားတာကလည်း ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပါပဲ။
ရေချိုးခန်းနဲ့ အကာကာပေးထားတဲ့အလုပ်နေရာလည်း ထားရှိပေးတဲ့အတွက် အလုပ်ရှုပ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေပါတယ်။
Capsule အမည်နဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့ ကျယ်ဝန်းတဲ့အခန်းရှိပြီး သာမန်ဟိုတယ်တွေလောက် မကျယ်တဲ့အတွက် ဈေးကတော့ သက်သာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလောက်အခန်းအရွယ်အစားကတော့ မကျဉ်းလွန်းမကျယ်လွန်းပါဘူး။
တည်းခိုသူအချင်းချင်း မျှဝေသုံးရတဲ့နေရာကလည်း အတော်လေး မိုက်ပါတယ်။
ကုတင်တစ်ခုပဲပါတဲ့ နေရာကျဥ်းကျဉ်းလေးဖြစ်ပေမယ့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး လင်းထင်းတဲ့အခန်းကတော့ စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ရာပါပဲ။
ညနက်လို့ အိမ်မပြန်နိုင်တဲ့အချိန်တွေတင်သာမက နေ့လည်တစ်ရေးအိပ်ဖို့တောင် လာချင်စရာပါပဲ။
အခိဟဘရမှာ ကာတွန်းပစ္စည်းတွေကို ကြည့်ရင်း ညနက်သွားလို့ အိပ်ပြန်ရခက်တာမျိုးတော့ မရှိဘူးထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆိုင်ပိတ်ချိန် သတ်မှတ်ထားလို့ပါ။
ဒါပေမယ့် သင်က အခိဟဘရကို နှစ်သက်တဲ့သူဆိုရင် အခိဟဘရမှာ ညကို ကုန်ဆုံးပြီး ဒီလိုဟိုတယ်မှာအိပ်ရမယ်ဆိုရင် အတော်လေးစိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ခရီးလေးတစ်ခု ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာနေထိုင်သူတွေဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဟိုတယ်တွေက ဈေးကြီးလွန်းလို့ ခရီးမသွားနိုင်တာမျိုးရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို Capsule ဟိုတယ်ကို ရှာဖွေပြီး တည်းခိုမယ်ဆိုရင်တော့ အကုန်အကျနည်းနည်းနဲ့ ခရီးသွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဘိုကင်စောစောတင်ရင် လျှော့ဈေးများများပေးတဲ့ နေရာတွေလည်း အများကြီးရှိတဲ့အတွက် ရှာဖွေကြည့်ကြည့်ပါနော်။
ဂျပန်နိုင်ငံကနေ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ Capsule Hotel
ဂျပန်နိုင်ငံကအစပြုခဲ့တဲ့ Capsule Hotel ကမ္ဘာတစ်၀ှမ်းလုံးမှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာ!!!
တိုကျိုမြို့တွင် ကိုရိုနာကြောင့်နေအိမ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရသူတို့အား Business Hotelအခန်းကို အခမဲ့နေခွင့်ပေးမည်။
Love Hotel ကိုဒီလိုအသုံးပြုကြတယ်? စိတ်ကူးတာထက်လက်တွေ့ဆန်တဲ့ဖောက်သည်တွေကြောင့် စွံ့ အရတဲ့ပိုင်ရှင်…
Telework အတွက် business hotel ဖွင့်ပေးလိုက်ကာမှ !!!!!
ကိုရိုနာကူးစက်လူနာတွေလက်ခံထားတဲ့ ဟိုတယ် ပြန်ဖွင့်ပါပြီ !!!!!
အပန်းဖြေဥယျာဉ်သို့ရောက်လာတဲ့ နွေရာသီအတွက် အကောင်းဆုံး ပရင်တာ က အေးမြသွားစေတယ် !!!
အရင်က ယာကူဇာလုပ်ခဲ့တာမို့လို့ ထောင်ကထွက်ပြီးတဲ့နောက် လမ်းပေါ်မှာ နေရတာက သဘာဝပဲလား?
(၈) ရက်နေ့၊ တိုကျိုကူးစက်မှုအသစ် ၂၃၉၂ ဦးရှိပြီး၊ အသက် ၂၀ နှစ်လူငယ်များ ၇၁၁ ဦးရှိ
ဂျပန် AV ရဲ့ဘုရင်တစ်ဆူ Toru Muranishi (ပြစ်မှုမှတ်တမ်း ၇ ခု၊ အကြွေး ယန်း၅ ဘီလီယံ၊ အမေရိကန်မှာအနှစ် ၃၇၀ ထောင်ဒဏ်ကျခဲ့သူ)
စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု ဧရိယာထဲမှထွက်ပါ !!!!!!!
ဂျပန်နိုင်ငံကို ကာကွယ်ပေးနေသော ပဟေဌိဆန်တဲ့အဖွဲ့အစည်း Yatagarasu
Aikido က တကယ်ပဲ စွမ်းသလား ?!!!!
ဂျပန်ဟာ ဒီလောက်တောင်လှုပ်ခတ်နေတယ်? (ဂျပန်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ မူမမှန်တဲ့ငလျင်အရေအတွက်)